Mai Chibwe VekwaZimuto: Kisimisi yakanaka kwamuri mese!!!
Kisimisi yakanaka kwamuri mese
Ndinokumbirawo uti mutambe mitambo miviri iy muchiziva kuti mumufaro wedu munowanikwa rufu dzimwe nguva.
Vanhu kana vafara vanoda zvokuvatana. Pamwe vanovatana nevanhu vavangosangana navo kuma Party nomudzimota dzokufambisa. Kana wafunga kudaro, chihwisisa kuti kunopfekwa kondhomu. Kana uri mukadzi kana uri murume, famba nemakondhomu ako akakukwanira kuti zvisakunetsa. Tese tinoziva kuti chihure chinouraya asi vanhu vanongochiita chete. Chenjerai.
Vanoenda kumusha kubva kune dzimwe nyika vanosvikowana kune vanhu vanovagamuchira nomufaro. Kana wako ari kure iwe wada kuhura, pfeka kondhomu.
Farai zvakanaka tisahwa zvokubhehuka nedzimota.
Kana uri MuKristu, hwisisa kuti Ishe havana kuzvagwa muna December, uye kuti tinovatenda mwedzi wese wese kwete muna December chete.
Kana une mukadzi/murume, woonawozve kuti wamuitirawo chimwe chinhu chinomufadza musi uyu chisiri chemhuri yese asi chake iye ega kuti azivewo uti shuwa musi uyu izuva rakasiyana nemamwe mazuva pakuti nepekuti. Zvokuti akapopota iwe wopopotawo bodo. Kana apopota iwe chideredza hwi rako utaure naye zvakanaka.
Pakunovata kana usiri kumwedzi, usingagwari, wombotaridzawo kuti nhasi izuva rokupanana nomoyo wese. Chiya chaanisikumbira uchimurambira ndiyonguva yekumupa.
Varumewo mombozama. Kana uchisiita zvokunyemudza, wombozamawo kuwedzera. Isu tinofarirawo kumbundikigwa nevarume vedu isawo mukadzi wakomumaoko ako womuudza nezverudo mobatwa nehope makadaro, BP roita shoma mumba. Pano pazororo, mowedzerawo zvinopiwa vamwe mumba kwete kungosweromwa doro nokubhema mbanje zvinoita kapuracha dzemuraini.
Kana une mota yokufambisa, ingoifambisa kusvika kumba woisiya yakadaro kusvika zororo rapera, woita nguva yakanaka nemhuri yako. Zvokuswerombeya uchinoona vanhu hazvina nebasa rese mazuvano.